02/28/2019 - 02:30
MPFMp-C2-GS549 - IT Equipment - Supply of Desktop Computer and UPS with licensed software နှင့်ပတ်သက်သည့် ကြေငြာချက်တွင် Submission Date အား (၂၁.၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့အစား (၂၈.၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့သို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။
Website date change (21 feb 2019 to 28 feb 2019).pdf မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် More
01/22/2019 - 02:00
စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီးဌာန More
REOI No.: MPFMp-C2-C505
Database Manager (Pdf).pdf မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် More
01/17/2019 - 11:15
စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနမှ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ဖြင့် Server များ၊ Data Storage, Software, Accessories များကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကိုသိရှိနိုင်ရန် တင်ဒါကြော်ငြာစာကို pdf download တွင် နှိပ်၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
PAPRD-Tender.pdf စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတတ်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန More
02/21/2019 - 03:00
Credit No. 54020-MM/ Grant No.: TF017190/ Project ID: P144952
Contract Title: IT Equipment – Supply of Desktop Computers and UPSs with licensed software
Reference No.: MPFMp-C2-ICB-GS549
MPFM.pdf မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် More
၁။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများနှင့် လုပ်ငန်းများကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူမည် ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာကျပ်ငွေ ဖြင့် မည်သူမဆို ဝင်ရောက် တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ပါသည်
၂ ။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖောင်ပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်နှင့် www.mopf.gov.mm နှင့် www.csostat.gov.mm Website တို့တွင် ရယူ နိုင်ပါသည်။
တင်ဒါဖောင်ရယူရမည့်ရက် - ၁၇-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့ မှ ၉-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ
Advertise 2018-2019 yyn.pdf ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ More
စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနမှ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ဖြင့် မိတ္တူကူးစက်များ(Copiers)၊ ပရင်တာများ(Printers)၊ စကင်နာများ(Scanners)နှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ တိုင်းတာရေးကိရိယာများကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို သိရှိနိုင်ရန်တင်ဒါကြော်ငြာစာကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Newspaper Advertisement_GS533_Measuring Instruments (track change).pdf စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတတ်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန More
11/29/2018 - 02:00
MPFMp-C2-GS551 - Supply of Printers,
Lot 1 - Passbook Printers, Qty 396;
Lot2(i) Dot matrix printers, Qty 32 nos, (ii) Laser Printers, Qty 49 nos.
Tender Advertisement (Printers).pdf မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် More
12/17/2018 - 03:00
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေတွင် ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများအား တင်ဒါခေါ်ယူ အပ်ပါသည်-
NAD(2232).pdf အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန More